Logitech G27 chinoramba chichingorerutsa mitemo sezvo vakasunungura chinoramba chichingorerutsa mitemo
mubvunzo Logitech G27 chinoramba chichingorerutsa mitemo sezvo vakasunungura chinoramba chichingorerutsa mitemo
1 gore 10 ago - 1 gore 10 ago #496 by JanneAir15
Mhoro! Zvinoita here kushandisa Logitech G27 chinoramba chichingorerutsa mitemo sezvo vakasunungura chinoramba chichingorerutsa mitemo. I kare akatsvaka sei kuzviita asi ini ndingadawo kubvunza kubva pano. Saka kana iwe unoziva sei kuti kwavari kushanda ndapota udzai pano.
No vanofanira kupindura zvakare! Chandakaita zvandakasarudza. Ndiri kuenda kunotenga joystick, chinoramba chichingorerutsa mitemo uye throttle. Izvi zvakanga zvakaoma uye ndakaziva kuti kutenga zvinhu zvakawanda zvine musoro kuzvishandisa.
Last edit: 1 gore 10 mwedzi yapfuura JanneAir15.
Time chokusika peji: 0.425 mumasekonzi